Photo frame - MYSTERY ZILLION
October 2009 edited June 2010 in Photoshop
photo တွေကို frame လေးတွေထည့်ချင်လို့ပါ။
ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတရ် ။
pls,answer me !!!
ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခွေတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ photo frame ဆိုပြီးပြောလိုက်။
အဲ့အခွေတဲ့မှာပါတဲ့ frame တွေကို အိမ်မှာပြန်ပြီးထည့်ပေါ့။ ဟီး ရှင်းလားမသိဘူး။
myartnoethu wrote: »
Frame ထည် ့ချင်တဲ ့နည်းကို သိချင်တာလား... Frame ကို လိုချင်တာလား...မရှင်းလို ့ပါ
photo frame လေးတွေ ကိုယ်တိုင်မဆွဲတတ်သေးရင် online ကနေ Free Download ယူလို ့ရပါတယ်
ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ပါ..။
အွန်လိုင်းမှာတင် ထားတဲ့Photo Frame တွေထဲက Background ကို transparent ဖြစ်ပြီး .PNG format နဲ့တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို ရရင် ပို ပြီး သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
တကယ်လို့JPEG ပုံတွေဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ကိုယ် ထည် ့မယ် ့ဘောင်အတွင်းသားနဲ့ဘောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကို ကို်ယ်တိုင် Selection မှတ်ပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...။
တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပါ..အသေးစိတ်ကို သိချင်လျင်..... Tutorial ကို ဒီလင့့်မှာ Video နှင် ့တစ်ကွ တင်ပေးထားပါတယ်.. ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူ လေ ့လာနိုင်ပါတယ်...
.PMG format နဲ့တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို ရရင် ပို ပြီး သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကြည့်ရတာ သောက်ရေသန့် ဝယ်ရင်းရေးလိုက်ပုံရပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကို Photo frame လို့ပြောင်းထားပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ခေါင်းစဉ်လေးများ တပ်ပေးရင် ဖတ်တဲ့လူတွေလည်း ဖတ်ရလွယ်မှာပါ ဒါ့ကြောင့် ပြောင်းပေးထားတယ်။
မှားတဲ့အခါလည်းမှားပေမပေါ ့....:d:d
အခုလို သတိပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... :6:
ifile မှာ တင်ပေးထားတဲ့ video file လေး ပြန်တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ .... ကျွန်တော်လည်း photo မှာ frame လေးတွေ ထည့်တတ်ချင်လို့ပါ ။
ကျွန်တော်.မှာလည်း photo frame တွေရှိတယ် ။ လိုချင်ရင်ပြောလေ ........ အို ပို.ရင်တောင် ကြာပါတယ် ။ တစ်ခွေ ၅၀၀ နဲ. ၀ယ် ........... ပြီးရော ။
Photo Frame တွေ ရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့ photoshop နဲ့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ ပြောပေးပါအုံးနော်